Samsung Galaxy Note 9 apụtaworị na netwọk | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Galaxy Note 9 apụtaworị na netwọk ahụ
Taa ndoputa na Amazon na oru na ahịa, ọhụrụ ụdị nke South Korea ike, na Samsung Galaxy S9 y Samsung Galaxy S9 Plus, n'otu oge ahụ dị ka ndị nke mbụ asịrị banyere ụdị na-esote na ọkwa ChetaNa nke a, ụfọdụ ozi gbasara ihe ga-abụ Samsung ọzọ a ga-ewepụta.
Ọ bụ eziokwu na ọ ka nwere ụbọchị ole na ole maka ngwaọrụ ọhụrụ a iji gosipụta ya na anyị ga-enwe ndidi ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta Nkọwapụta 9 ọhụụ, mana o doro anya na ihe anyị hụrụ na S9 na S9 Plus ụdị, Nkọwa 9 ga-agbaso usoro ndị ahụ.
Ihe anyị na-ekwu na nke a bụ na ụlọ ọrụ ahụ adịghị ka ọ chọrọ itinye ihe ngbanwe imewe maka nke a. phablet nwere ngosi ngosi S-pen nke 6,3-inch, ya mere, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ ga-abụ otu ihe ahụ dị na mbụ gosipụtara na afọ gara aga 2017. Ndị mgbasa ozi Slashgear na-ahapụ anyị obere mkpokọta nke asịrị mbụ ka anyị wee nwee echiche nke ihe na-echere anyị na Galaxy Note 9 a. nke ahụ ga-eweta ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga dịka atụmatụ si dị n'oge ọkọchị, ọkachasị n'August.
Na nhazi Qualcomm Snapdragon 845 maka nsụgharị na-abụghị nke Europe yana Samsung Exynos 9 Octa 9810, maka anyị. Enwere okwu banyere ihuenyo Super Amoled nwere mkpebi 2960 x 1440 na 6 GB maka RAM. Banyere igwefoto, ha dọrọ aka na ntị na ọ ga - enwe azụ azụ 12 MP na 8 MP maka n'ihu. Batrị 3300 mAh ga-enwe asambodo IP68 na agba anọ ma ọ bụrụ na ha kpebie ịgbakwunye "pink" nke anyị hụrụ na S9 na S9 Plus ọhụrụ, na-ahapụ ya na oji, isi awọ, acha anụnụ anụnụ na pink.
Na nkenke, anyị na-eche mkpokọta nke mbụ leaked data na n'ezie obere ga-agbanwe na-akwanyere eziokwu, ebe ọ bụ na a afọ ọ bụ oge na-aga n'ihu na otu imewe na mma nkọwa nke Samsung ka kacha, na-enweghị na-emetụ imewe. Banyere ahịa ọ dịghị ihe doro anya ma ọ bụ ya mere na ọ kacha mma ịghara ikwu ihe ọ bụla ruo mgbe oge ụfọdụ gafere ma anyị na-ahụ akụkọ ndị ọzọ metụtara ma Anyị echeghị na ọ dịgasị iche na nke ugbu a nke Nkọwa 8 na mbido.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung Galaxy Note 9 apụtaworị na netwọk ahụ
Thrustmaster na-agbakwunye ekweisi ọhụrụ ọhụụ abụọ Far Cry 5
N'ime izu ole na ole Tiangong-1 ga-ada Earthwa ma ọ nweghị onye maara kpọmkwem ebe